Kubuyiswe ubuholi obudala be-ANC | IOL
Lokhu kulandela izinsongo nokusabisana obekukhona nemizamo ebishisa phansi yokuthi uMnuz Mzwandile Mkhwanazi angabuyeli esikhundleni ngoba kukhona iqembu lamalungu ebelizibiza ngeForces Of Change ebelingamfuni.
UMkhwanazi ubuyele naso sonke isigungu sakhe okubalwa uMnuz Tolomane Mnyayiza obuyele ekubeni uSihlalo, wasekelwa uMnuz Mondli Chiliza kwathi uNksz Phumlile Mthiyane wabuyela njengephini likaNobhala kanti uMgcinimafa kubuyiswe uNkk Ntombifikile Gumede obengafunwa uphiko lwentsha ye-ANC ebithi usekhulile kodwa ibifuna esikhundleni sakhe kufakwe uMuz Mlungisi Ngcobo.
“Ngifisa ukubonga zonke izithunywa ebezihambele ingqungquthela ngokuthemba lobu buholi nokuthi yize besihlukene ngemibono kodwa isikhathi lesi sokuthi siseseke ngokuphelele isigungu esikhethiwe. Mayelana nezinkinga ezibekhona sinqume ukuthi lokho kuzobhekwa kodwa okwamanje sizogxila kakhulu ekuqiniseni ubumbano enhlanganweni,” kusho uMkhwanazi.
Abaholi abangalibonanga elidlalayo kube uMnuz Bonga Khanyile obegaqele isikhundla sokuba iphini likaSihlalo, kube uMnuz Thabani Dube obekubhekwe ukuthi akhethwe njengoNobhala yena ubezosekelwa uNksz Thuleleni Khanyase, uMgcini-mafa bekuzoba uMnuz Sydney Gumede oyiMeya yaseMzumbe.
Bonke laba bebezibiza ngeForces of Change ebifake izikibha ezinsundu okwemibala yamasosha kanti iningi labo belibonakala linolaka lingafuni nakuyizwa indaba kaMkhwanazi limsola ngokungaholi inhlangano ngendlela.
Le ngqungquthela iqale ngoLwesihlanu lapho izithunywa bezibhalisa kwathi ngoMgqibelo yavulwa ngokusemthethweni iphini likaNobhala we-ANC KwaZulu-Natal uNkk Nomusa Dube-Ncube.
NgoMgqibelo kusuke uthuthuva ngesikhathi izithunywa ezizibiza nge-Forces of Change zivuka umbhejazana zishaya unogada okuvela ukuthi oweSandile Security obejutshwe isifundazwe ngoba zimsola ngokuchema nohlangothi obeluhamba nobuholi obukhethwe izolo .
Lo nogada ushaywe ngisho amaphoyisa esekhona ezama ukuzolamula kodwa izithunywa zamthela iqupha zimshaya nangezimpama zizama ukumphuca isibhamu abanye bakhipha ezabo ngoba bekhala ngokuthi ubasabisa ngokubadubula ngoba efuna bakhiphe izigqebhezana ekubeni abanye engazange azifune kubona.
Ngesikhathi eqeda ukushaywa abesifazane abebethukuthele nabesilisa bezwakale bethi bamnabisile ngenduku futhi uyoxoxela ngisho umkakhe ukuthi bamenzeni Ogwini.
Lesi senzo sithuse ngisho abaholi kangangokuthi uMnuz Joe Phaahla obejutshwe isigungu sikazwelonke se-ANC uzwakalise ukuphoxeka kwakhe ngokuziphatha kwamalungu ngaloluya hlobo wathi aphelelwe inhlonipho.
UNobhala we-ANC KwaZulu-Natal, uMnuz Sihle Zikalala ubongele ubuholi obukhethiwe wathi unesiqiniseko sokuthi bazoqhubeka nokuhola inhlangano ngempumelelo.
Izolo kuke kwaba nolaka obelubonakala kumalungu abengasavunyelwe ukungena ngaphakathi kodwa isimo sibuye salawuleka.